Wasiir Maaliyadda XFS oo shirar uga soo qayb galay Sacuudiga iyo Kuwait – STAR FM SOMALIA
Wasiir Maaliyadda XFS oo shirar uga soo qayb galay Sacuudiga iyo Kuwait
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti oo saaka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay shirar muhiim ah oo uu uga qeyb galay dalalka Sacuudiga iyo Kuwait.
Wasiirka ayaa ugu horayntii ka qayb galay shirkii hor dhaca u ahaa kulankii ay isgu yimaadeen madaxda wadamadda Latin America iyo Carabta ee ka dhacay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga
Sidoo kale Wasiirka ayaa intuu socday shirka waxaa uu kulan gaar ah la qaatay madaxa Sanduuqa Horumarinta ee Sacuudiga Eng. Yusuf Al-basam, kaasoo ay ka wada hadleen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa dib u soo celinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo sidii loo hormarin lahaa adeegyada bulshada sida Waxbarashada, Caafimaadka, Biyo galinta magaalooyinka iyo Dib u soo celinta qaxootiga ku dhibaataysan dalalka dariska ah.
Wasiir Fargeeti ayaa ka qayb galay shir ka dhacay magaalada Kuwait oo ay si wada jir ah u wada qaban qaabiyeen Hay’ada Lacagta Adduunka (IMF) iyo Bangiga Dhexe ee Kuwait, kaasoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 40 wadan, waxaana shirka looga hadlay qaabka uu u shaqeeyo nidaamka maaliyadeed ee Islaamiga ah ee ku salaysan dulsaar la’aanta (Islamic Finance), waxaana la isku afgartay in la baahiyo isticmaalka Islamic Finance oo waayahaan danbe aad ugu soo xoogaysanayey caalamka.
Dhanka kale Wasiirka ayaa kulan gaar ah la yeeshay intuu ku sugnaa magaalada Kuwait madaxa Sanduuqa Horumarinta ee dalka Kuwait Dr. Cabdullwahab Al-bader, waxayna isla soo qaadeen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa kor u qaadida kobaca dhaqaalaha iyo horumar lagu sameeyo dib u soo noolaynta dhaqaalaha dalka,
Ugu dambent Wasiirka ayaa magaalda Nairobi kulan kula qaatay safiirka cusub ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya, Amb. David H. Kaeuper waxayna ka wada hadleen marxalada siyaasadeed ee dalka iyo horumarka dowladda Soomaaliya ay ku talaabsatay ee dhanka maamulka maareynta maaliyadda. Wuxuuna safiirku ku aamanay dowladda Soomaaliya iney muujisay horumar dhanka kobaca dhaqaalaha iyo baahinta nidaamka maaliyadeed ee dalka.
Ciidamada Nabad Suggida Maamulka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay rag lagu eedeeyey in ay qaraxyo waday